ရော်ဘာစက်၊ ချုံ့စက်၊ Press Vulcanizer - DASS Machinery
DASS HL စီးရီး
အအေး & အပူ
granulating & ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း
ပလပ်စတစ် Lnjection စက်
မှို Flow အားသုံးသပ်ခြင်း & အအေး Runner
ရော်ဘာထိုးသွင်း Moudling စက်
Doush သည်တရုတ်နိုင်ငံ၏ဥရောပအဆင့်ရာဘာဆေးထိုးစက်ဖြစ်သည်။ morden စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၊ အားကြီးသော R&D အဖွဲ့၊ တိကျသောထုတ်လုပ်သည့်စက်ကိရိယာများ၊ တင်းကျပ်သော QC စနစ်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုမြင့်မားစွာထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။
Doush ရော်ဘာဒေါင်လိုက် Injec ...
Doush ရော်ဘာထိုးဆေး ...
Doush ရော်ဘာအလျားလိုက်အင်း ...
DASS HL စီးရီး (ဒေါင်လိုက်အမျိုးအစား)
စက်အင်္ဂါရပ်ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် 1 ....
ES Standard ရော်ဘာ Preformer
စက်၏အင်္ဂါရပ်များ: ၁ ။
ရှန်ဟိုင်းအခြေစိုက်ရုံးချုပ်နှင့် Ningbo တွင်ရုံးချုပ်တည်ရှိသော DASS သည်ရော်ဘာနှင့်ပလတ်စတစ်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာနယ်ပယ်ကိုလွှမ်းခြုံထားသောကုန်ပစ္စည်းများစွာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ထုတ်ကုန်များအပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောတရုတ်ပေးသွင်းသူများစွာနှင့်လည်းနီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်သည်။ ဖောက်သည်များကိုထူးချွန်သောထုတ်လုပ်သူများအားစျေး ၀ ယ်ခြင်းအတွေ့အကြုံနှင့်ဒေသဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများပေးပို့ရန်ကတိကဝတ်ပြုသည်။ ခိုင်မာသောနည်းပညာအင်အားနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလျှောက်လွှာတွင်အတွေ့အကြုံများစွာရှိခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရောင်းအားဈေးကွက်တွင်သိသိသာသာတိုးတက်မှုရှိသည်။
DOUSH Clamping ယူနစ်
DOUSH Clamping Unit 1.ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံ၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု အခမဲ့ 2. အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော လည်စည်းဘားသည် အထူးကောင်းမွန်သော မျဉ်းပြိုင်ဖြစ်ကြောင်း သေချာစေရန် 3.High frequency quenching and hard chrome plating ၊ တည်ငြိမ်ပြီး သံချေးတက်ခြင်းမရှိပါ 4.မလိုအပ်ဘဲ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ရှေ့တံခါးရှိ ကန့်လန့်ကာ 5. Lowest operation high 960mm 6. ပိုကြီးတဲ့ အဖွင့်လမ်းကြောင်း...
အရေးကြီးဒေတာနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကို နှစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ပါ။
First Out Injection Unit တွင် ဦးစွာဆေးကြောပါ။
ပထမဦးစွာထုတ်ဆေးထိုးယူနစ်တွင် DOUSH ပထမဦးစွာ 1. အတိုဆုံး နော်ဇယ်ဒီဇိုင်း၊ မလိုအပ်ဘဲ အချိတ်အဆက်မရှိ = ယိုစိမ့်မှုမရှိ 2. ဒေါင်လိုက်ထိုးသွင်းမှု အနိမ့်ဆုံးဖိအားဆုံးရှုံး 3.United plastic temperature 4. ဟောင်းနွမ်းမှုနည်းပြီး လျှံထွက်မှု ရလဒ်ပုံစံ အခမဲ့-floating ထိုးဆေး ပစ္စတင် 5. အထူးဒီဇိုင်းဝက်အူ → ပလတ်စတစ်ဆားလုပ်ချိန် နည်းပါးခြင်း၊ လွယ်ကူခြင်း မရှိခြင်း...
Gasket Seals အတွက် ရော်ဘာထိုးထည့်ခြင်း
Gasket Seals များအတွက် ရော်ဘာထိုးထည့်ခြင်းအား ရော်ဘာဆေးထိုးမှိုနှင့် အရည်ဆီလီကွန်ရော်ဘာဆေးထိုးခြင်း & LIM ဟုခေါ်သည်၊ ၎င်းသည် သမားရိုးကျ ဆီလီကွန်ရော်ဘာဖိသိပ်မှု machi ဖြင့်မဟုတ်ဘဲ အရည်ဆီလီကွန်ရော်ဘာအစိတ်အပိုင်းများ သို့မဟုတ် ထုတ်ကုန်များကို ဆေးထိုးပုံသွင်းသည့်စက်များဖြင့် ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
စိတ်ကြိုက်ပုံသွင်းထားသော Seals များကို မည်သို့ထုတ်လုပ်ထားသနည်း။
စိတ်ကြိုက်ပုံသွင်းထားသော ဖျံများထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် အဓိကနည်းလမ်းသုံးမျိုးရှိပါသည်။ Injection Molding Injection Molding သည် စိတ်ကြိုက်တံဆိပ်များ အတွက် ကုန်ကျစရိတ်အသက်သာဆုံး ထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်းဖြစ်ပြီး သေးငယ်သော ထုတ်ကုန်များကို တင်းကျပ်စွာ ခံနိုင်ရည်ရှိ၍ မြင့်မားသော ထုထည်များတွင် ပြီးစီးမှု လိုအပ်ချက် အနည်းငယ်မျှသာရှိသော ထုတ်ကုန်ငယ်များကို ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်...
Shanghai DASS Machinery Co. , Ltd.
ဖုန်းနံပါတ်: +86 574 89206175
©မူပိုင်ခွင့် - 2010-2020: မူပိုင်ခွင့်များရယူထားပါ။ Featured ထုတ်ကုန်များ - Sitemap - Mobile Site
Vulcanizer ကိုနှိပ်ပါ, ရော်ဘာထုတ် , Extrusion Auxiliary Equipment , Rubber Press ၊